कलाकार सिंखडाद्वारा डा. केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धताको आव्हान – Nepal Japan
कलाकार सिंखडाद्वारा डा. केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धताको आव्हान
नेपाल जापान २२ आश्विन २३:३०
२४ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहनुभएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँको जीवनरक्षाका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई चर्को दवाव परिरहेको छ । यसै क्रममा कोरोना संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा रहनुभएका कलाकार श्रीकृष्ण सिंखडाले एक विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीको जीवनरक्षाको आव्हान गर्नुभएको छ ।
सिंखडाले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि १९ औं पटक अनशनमा बस्नुभएका डा. केसीले उठाउनुभएका मुद्दा समाज परिवर्तनका विषय रहेकाले मागप्रति समर्थन जनाउँदै उहाँको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आव्हान गर्नुभएको छ ।
उहाँले सरकारले डा. केसीको माग गरीबको पहुँचमा स्वास्थ्य सुविधा रहेकाले ती छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरोस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नागरिक समाज, पत्रकार, प्राध्यापक, चिकित्सक, विद्यार्थी, कलाकार सबैमा ऐक्यबद्धताका लागि आब्हान गर्नुभएको छ ।